युवासंघ अध्यक्ष राजिव पहारीले गरे 'चार प्रसंगमा चार प्रहार !' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
युवासंघ अध्यक्ष राजिव पहारीले गरे ‘चार प्रसंगमा चार प्रहार !’
Posted by Headline Nepal | १६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १८:०२ |
यतीबेला युवासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष राजिव पहारी चर्चाको शिखरमा छन । एमालेको प्रमुख भातृ संगठन युवासंघको नेतृत्व गरिरहेका उनले पहिलो चरणकोे स्थानिय निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो बनाउन युवाहरुको परिचालन सक्रिय ढंङ्गले गरे । अहिले उनी उत्साहित छन । दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा युवासंघले फेरी तराई लगायत सुदुरपश्चिममा राष्ट्रिय युवा परिचालन गर्ने निति लिएको छ । जसको कारण एमालेलाई निर्वाचनमा होमिन सहज हुनेछ । विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने नेता पहारी दशौँ गणतन्त्र दिवसको संघारमा आइपुग्दा पनि,पात्र फेरीएको तर प्रवृती नफेरिएकोमा भने चिन्तित छन । गणतन्त्रमा ज्यानको बाजी लगाएर योगदान गर्नेहरु पाखामा पर्ने र प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै छोरालाई पदवी दिएकामा उनको आक्रोश थियो । यसै अवसरमा हेडलाईन नेपालका लागि राज ढुंगानाले युवासंघ नेपालका अध्यक्ष पहारी कै कार्यकक्षमा पुगेर गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनीसंग विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका थिए । पहारीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप
दशौँ गणतन्त्र दिवस : पात्र फेरिए तर प्रवृती फेरिएन
सात दशकदेखी नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै निर्माण गरेर कुनैपनि नामको निरङकुशता अधिनायकवाद,सामन्तवाद र कुनैपनि व्यक्तिको कोखमा जन्मेको व्यक्ति चाहे तयो पागल भएतापनि फौजदारी हिसावले सामाजिक हिसावले बहिस्कृत र तिरस्कृत भएपनि जन्मने बितिकै राजयको चाँही राजयको सम्मानित कार्यकारीणी पद प्राप्त गर्ने सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताले राज्यको सर्वोच्च अंगमा आफ्नो जनप्रतिनिधी आफै चयन गर्ने व्यवस्था स्थापना गरेका दिन हो ।
गणतन्त्र दिवस । तर्सथ यो गणतन्त्र दिवस कुनैपनि पुँजीवादी व्यवस्थामा सवैभन्दा उच्चतम उपलव्धी र प्राप्ती नै हो र यो गणतन्त्र नेपालमा संघिय गणतन्त्र ल्याउनको निम्ती नेपालका युवाहरुले एकदमै ठुलो महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएका छन कुर्वानी गरेका छन । आन्दोलन गरेका छन । मुलुकमा र समुल राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थपना गर्नको निम्ती थुप्रै युवासाथीहरुले साहदत्त प्राप्त गर्नुभएको छ । घाईते हुनुभएको छ ।
अगंभगं हुनुभएको छ । सम्पुर्ण नेपाली जनताहरुले ठुलो दुख, कष्ट,त्याग बलिदान दिएरचाँही मुलुकमा गणतन्त्र स्थपना भएको हो । हामीलाई थाहा छ युवासंघ कै संस्थापक अध्यक्ष बर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न चौध बर्ष जेल दुईबर्ष जेलभित्रको पनि सेलमा चाँही उहाँले आफ्नो कठोर यातना सहितको जिवन व्यतित गनुपर्यो । त्यस्तै पार्टीमा रहनुभएका अन्य नेताहरुले पनि उतिकै तयाग र तपस्या गर्नुपर्यो । धेरैको घरवार विहिन अवस्था भयो । आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा म सम्पुर्ण सहितहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु । र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ती महत्वपुर्ण योगदान गर्नुहुने सम्पुर्ण व्यक्तित्वहरुलाई सम्झन चाहन्छु । सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु युवासंघको तर्फबाट ।
गणतन्त्र आइसकेपछि व्यक्तिी फेरिए, पात्र फेरिए तर प्रवृती फेरिएन । गणतन्त्र आएपनि जनताले आधारभुत तहमा त्यसको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । जनताको दैनिक जिवनमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुती गर्नचाँही पाएका छैनन् । जनताको दैनिक जनजिविकाको सवालमा भन्नुस, उनीहरुले वास्तवमा आफ्नै दैलोमा गणतन्त्र आएको छ त भन्ने अनुभव गर्न पाएका छैनन् । मुलुकले जुन ढंगले विकास निर्माणले गति लिनपर्ने हो तयो पनि लिन सकेको छैन । आज दैनिक रुपमा १७०० युवाहरु नेपालमा रोजगारी नपाएर बिदेशिन बाध्य छन । यो तितो यथार्थलाई हामीले अन्त्य गर्न सकेको छैनौँ ।
तिनवटा श्रीमती विहे गरेबापत प्रकाशले पदक पाएका ?
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राज्यबाट अपराधी घोषित भएका व्यक्तिहरु ग्णतन्त्र दिवसको अवसरमा राज्यले अत्यन्तै महत्वपुर्ण योगदान दिएका व्यक्तित्वहरुलाई जसले आफ्नो सम्पुर्ण जिवन राष्ट्र र जनताको निम्ती सर्मपित गरेका छन । जसले नयाँ नयाँ कुराहरु पत्ता लगाएर मुलुकलाई सम्वृद्धीतिर लैजान योगदान पुर्याउका छन । जसले नेपालको युवा आन्दोलनमा,महिला आन्दोलनमा,विद्यार्थी आन्दोलनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याएका छन । त्यस्ता व्यक्तिहरु ज्स्तो मैनबत्ती जस्तो जो मान्छेले आफु जलेर अरुलाई उज्यालो दिए । त्यस्ता व्यक्तित्वहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने मान सम्मान तथा पदकहरु कानुनको नजरमा अपराधी घोषित भएका जो जेलमा हुनपर्नेहरु आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पदक पाएका छन । सम्मान पाएका छन । आज सम्पुर्ण नेपाली जनता आश्र्चयचकित भएका छन ।
आज प्रकाश दाहाल भन्ने व्यक्तिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जनसेवा श्री पदकले विभुषित गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यो पदक के को निम्ती पाएका ? किन पाएका ? तिनवटा श्रीमती विहे गरेबापत पाएका ? प्रचण्डको एकल छोरो भएका कारण पाएका ? सारा ठाँउमा रक्सी खाँदै गरेको बापत पाएका ? मुलुकको विकास निमार्णमा लामो समय बाधक भएकै कारणले पाएका ? हत्या,हिंसा, अराजकता र अपराधी खालको प्रवृती बढाएका कारणले पाएका ? वा के कारणले पाएका ? आज यस्तैयस्तै प्रवृती बोकेका व्यक्तिहरुले मान सम्मान पदक पाएको कारणले आज सिङ्गो गणतन्त्रमाथी नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । र प्रचण्डजस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै जसले तिनतिन वटी बुहारी प्रचण्डलाई प्रदान गरेकै कारणले यो पदक पाएका हुन की नत्र म प्रश्न सोध्न चाहन्छु मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डलाई, तपाँईलार्य अलिकती लाज लाग्नपर्ने होइन ? छोरालाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मान पदक दिँदा । तपाईका छोराले यो मुलुकमा के योगदान पुर्याए ? के चाँही दिए ? तपाँइले कुनै मान्छे पाउनुभएन र आफ्नो छोरालाई पदक दिनपर्यो । यदी तपाँई साच्चिकै नेता हो भने तपाँई गणतन्त्रमाथी विश्वास गर्नुहुन्छ ।
तपाई लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामा विश्वास राख्नुहुनेछ भने त तपाईले तपाईँको छोरालाई जेल हाल्नुपथ्र्यो । अहिले नेपालको कानुनमा बहुविवाह गर्नेलाई जेलसजाय तोकेको छ । तर आज तपाईँको बुहारी सिर्जना त्रीपाठीले म सँग डिभोर्स नगरि श्रीमानले २ विहे गरिसकेका छन्, भनि कारबाहि गर्न माग गरिरहेको अवस्था छ भने तपाईँ उसलाई पदक दिने ? सम्मान गर्ने ? आज उहाँले जाँडरक्सि पिएर विभिन्न ठाउँमा होहल्ला गर्दै हिड्नुभएको छ, मनपरि गर्दै हिड्नुभएको छ । उहाँले हतियार बोकेर हिड्नुहुन्छ । गुण्डागर्दी गरेर हिड्नुहुन्छ । अनि तपाईँ चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई मान पदक दिएर सिङ्गो उपहास गरिरहनुभएको छ । यस्तै–यस्तै प्रविति बोकेका व्यक्तिलाई तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्छ । के नेपालको मान पदक भनेको माओवादीका गुरिल्लाहरुलाई, माओवादीको कार्यकर्ताहरुलाई दिने चिज त होईन नि । तपाईँले त सिङ्गो मुलुकलाई लज्जित बनाईरहनुभएको छ । दिन मन लाग्छ भने दिनुस् आफ्ना मानिसलाई आफ्नो निजी सम्पति दिनुस् । प्रचण्डलाई यो कुरा भनेर त केहि हुन्न, के लाई पुराण सुनाएको जस्तै हो ।
माओवादीले भरतपुरमा मतपत्र च्यातेको होइन, गणतन्त्र च्यातेका हुन
अर्को कुरा, प्रचण्डमा परिवार मोह यति धेरै छ कि उहाँले सत्ताको निम्ति मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता नै समाप्त पार्न पनि पछि हट्नुहुन्न । भरतपुरमा आफ्नो छोरीलाई जिताउनका निम्ति प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरि वाईसियलका केटाहरुलाई लगाएर मतपत्र च्यात्न लगाउनुभयो आज गणतन्त्र दिवसको दिन । त्यो मतपत्र च्यात्ने काम हैन, नेपालको लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई च्यात्ने काम गरेको हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन होईन ? निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, महागठबन्धन गर्ने, यो महागठबन्धन भनेको २ ४ ओटा माकुरारु मिलेर जालो लगाई हात्तिलाई रोक्न खोजेको प्रयत्न थियो । त्यो प्रयत्न सफल नभएपछि पोखरा लेखनाथमा पनि लज्जास्पद हार बेर्हाेनुपरेको, काठमाण्डौँमा पनि २२ हजार मतान्तरले हार्नुपरेको, भरतपुरमा पनि त्यहि स्थिीती सिर्जना हुने डरले वाईसियलका केटाहरु लगाई कानुन हातमा लिएर मतपत्र च्याते ।
तिनीहरुको जुनसुकै हालतमा कारबाही हुनुपर्छ । प्रहरीले भनिसकेक छन् बाँदरले झैँ उफ्रिउफ्रि मतपत्र च्याते । मतपत्र च्यात्ने वाईसियलको ईन्चार्ज र अध्यक्षलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेका छन्, अनि यसको छानविन गनुपर्छ भनेको के हो ? कसले गरेके हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । मतपत्र च्यात्ने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा वाईसियलका केटाहरुले गरेका छन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ । सुर्यलाई हत्केलाले छेक्ने र रोक्ने प्रयत्न नगरियोस् । यदि सरकारले, प्रहरी प्रशाषनले, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहि गर्दैन भने युवा संघ नेपालले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पछि पर्दैन । र अहिले २० वर्षपछि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ । यो एक हिसावले स्थानिय सरकारको निर्वाचन पनि हो । स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जुन ढंङगबाट विजय प्राप्त गरेको छ ।
यो नेकपा एमालेले राष्ट्रियता, जनताको जनजिवीका,युवाहरुको निम्ती,युवाहरुको निम्ती,वृद्धहरुको निम्ती,विद्यार्थीहरुको निम्त समाजका सबै वर्ग र पक्षको निम्ती नेकपा एमालेले खेलेको भुमिकाको कारणले नेकपा एमालेको निती अनुसारको नेतृत्वका कारणले पनि यो जितको हो । एमालेका अध्यक्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले देखाएका मुर्छित सपनाको कारणले देश अहिले ब्युउझिएको छ । जुनबेला नेकपा एमालेको नेतृत्व्मा लोडसेडिङ हटाउन जुन किसिमको खाका कोरियो, र त्यही अनुसारको काम अघि बढाइयो अहिले त्यो सपना एक हद सम्म पुरा भएको छ । अहिले फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैले पुरा गर्दै छ । पानी जहाज नेपाल आफैले किन्दैछ । हावाबाट विजुली निकाल्ने काम भएको छ । नेपाललाई १० बर्ष भित्र एउटा सम्वृद्ध मुलुकको रुपमा अघि बढाउने सोचहरु अघि बढेका छन । यी मुर्तरुप दिनको निम्ती , कार्यान्वयन गराउनको निम्ती नेकपा एमालेले अहिले स्थानिय निर्वाचनमा जुन किसिमको विजय हासिल गरेको छ । त्यसले अझै सघाउन मद्धत पुर्याएको छ ।
भुरा, टाकुरे मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई पाखा लगाउन राष्ट्रिय युवा परिचालन अभियान
दास्रो चरणको निर्वाचन जुन मितिमा हुदैछ । त्यसको निम्ती युवासंघ नेपालले राष्ट्रिय युवा परिचालन अभियान सुरुवात गरेको छ । हामी तयसको सुरुवात गरेको छौँ । जेठ १४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मलाई पार्टीको सुर्यचिन्ह अंकित झण्डा दिएर सुरुवात गर्नुभएको छ । र दोस्रो चरणको निर्वाचन हाम्रो लागि अझै महत्वपुर्ण छ । किनभने तराई–मधेसका २२ जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ । सुदुरपश्चिममा पनि हुँदैछ । पहिलो चरणमा २६० तहमा निर्वाचनमा भए । त्यसमा हाम्रो स्पष्ट अग्रता रहेको छ । अहिलेपनि झण्डै ४५० भन्दा बढी ठाँउमा स्थानिय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यसमा सवै तहको निर्वाचनमा एमालेले जित्न आवश्यक छ । तराई मधेसमा विखण्डनकारी, अराजक सोच राख्ने अवारावादी मान्यता राख्ने तत्वहरुलाई परास्त गर्न आवश्यक छ । सत्ताको निम्ती प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको निम्ती राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ती स्वतन्त्रताको निम्ती राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्दै सिक्किमीकरण गर्न चाहने,फिजीकरण गर्न चाहने, भुटानीकरण गर्न चाहने तत्वहरुलाई यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा लज्जाजनक तरिकाले परास्त गर्न आवश्यक छ ।
त्यसो भएर युवासंघ नेपालले आफ्ना सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा हामीले मेची देखी महाकाली सम्म हामीले राष्ट्रिय युवा परिचालन अभियान सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ । जेठ १४ बाट त्यो सुरुवात भएको छ । मेचीमा उपाध्यक्ष गोविन्द थापा, कोसीमा सचिव पशुराम बस्नेत, जनकपुरमा म आफैँ र सचिव मन्जु यादव, सगरमाथामा उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, प्रभात कटवाल, नारायणीमा सचिव राजेश शाह र कोषाध्यक्ष हृदम लामा, लुम्बिनीमा महासचिव किरण पौडेल र सचिव क्रान्ति बुर्लाकोटी, राप्तिमा सचिव माधव वास्तोला र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष हिराचन्द केसी, भेरीमा उपाध्यक्ष चन्द्र लामा र सचिव हस्त शाहि, सेतीमा उपाध्यक्ष दिलु पन्त र सचिव नरेश शाही, महाकालीमा सचिव वचन शिरु ।
हामीले पदाधिकारीहरु र केन्द्रिय सदस्यहरुलाई परिचालित गर्नेछौँ । उहाँहरु भोली नै त्यहाँ जानुहुनेछ । तराई मधेशमा अहिले किन एमालेले जित्नुपर्छ भने सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको निम्ति । अहिले त्यहाँ सातओटा भ्यागुताहरु मिलेर पानी परेको बेला खेतामा बसेर ट्यार्र टुर्र गर्दैछन् रे मधेशमा को आँउछ भनेर । हिजो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि तराई मधेशमा कोहि जान नसक्दा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको निर्देशनमा हामी युवा संघ नेपाल गएको थियो । हामी त्यहाँ जाँदा त्यहाँका राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर लगायतका उर्ले, काठमाण्डौँमा बसेर ठुला कुरा गरेर हुन्छ ? हिम्मत छ भने सर्लाहीको हरिवनमा आएर कार्यक्रम गरेर देखाऊन भने, जब हामी सर्लाहीको हरिवनमा गएर मधेश सम्वाद अभियानको सुरुवात गर्योँैँ, त्यसपछि उहाँहरु उफ्रेर विरगञ्ज पुगे । ल हरिवनमा गरेर हुन्छ ? हिम्मत छ भने, हामीले फेरि घण्टाघरमा कार्यक्रम गर्यौँ । उनीहरु फेरी उफ्रेर जनकपुरधाम पुगे र भने हिम्मत छ भने जनकपुरधाम आएर कार्यक्रम गर भने, त्यसपछि हामी जनकपुरधाम पुगेर कार्यक्रम गर्यौँ । त्यसपछि फेरी उनीहरु उफ्रेर डिल्ली पुगे र भने हिम्मत छ भने डिल्ली आएर कार्यक्रम गर, हामी त डिल्ली जाने कुरा भएन । त्यो त अर्को मुलुक हो ।
त्यसैले यो मधेश केन्द्रित दल मधेशवादी दल होईनन्, मधेशवादी दल त नेकपा एमाले हो । ११६ सिटमा १२ सिट जितेका भुरा, टाकुरे मधेशकेन्द्रित दलहरुले धेरै फुर्ती नलाउँदा हुन्छ । उनीहरुले नेपाली जनताको मानो खाएर भारतको गाना गाउने, नेपाली जनताले दिएको कुर्सीमा बसेर भारतको चाप्लुसी गर्ने, नेपाली जनताको घरमा बसेर भारतको भर पर्ने उनीहरुको प्रविति हो । यो प्रवितिलाई परास्त गरेर हामी अघि बढ्ने छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै भन्दा धेरै युवा साथीहरुले जनप्रतिनीधिको रुपमा जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अब मुलुक विकास निर्माणमा अघि बढि सकेको छ । विकास निर्माणको कार्यहरु स्थानीय तहबाट सरु हुनेछ । विकास निर्माणका लागि साथीहरु लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।
Previousसुनसहित विमानस्थलबाट दुई जना पक्राउ
Next‘बजेट भाषणले विराटनगरमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा नपरेको शङ्का उब्जिएको छ’ : उद्योगी जाजु
‘चुनावको मुखमा हुन लागेको एमाले–माओवादी गठबन्धन अस्वभाविक’ : कांग्रेस
१७ आश्विन २०७४, मंगलवार १२:१४
नेपाल र भारतबीच सहमति भएका परियोजना अनुगमन संयन्त्रको दुई पक्षीय बैठक बस्दै
१४ मंसिर २०७३, मंगलवार १०:३६
७ आश्विन २०७४, शनिबार ०७:३४
न्यायाधीश अमेरिका जाँने भएपछि भरतपुर प्रकरण अझै लम्बियो, अर्को सुनुवाई साउन ८ गते
२ श्रावण २०७४, सोमबार १७:३९